Dhaamsa Gadda – KY ABO Irra
Posted: Bitootessa/March 5, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (1)
Hangafa fi bu’uresa qabsoo bilisummaa Oromoo kan ture gooticha Oromoon qabaacha turte Kabajamoo Soreesi Jaaraa Abbaa Gadaa aduyaa kanaraa du’an darbun isa KY ABO fi miseensota keenya birati gadda guddadhan yaadatama. Jaaraa Abbaa Gadaa bilisummaa ummata Oromoo mirkaneesuf nama of kenee jireenya isa guutuu qabsoo hadhooftu kesa ture darbeedha. Gootichi Jaaraa Abbaa Gadaa qabsoo bara dheera gageesa turen ummani Oromoo injifannoo gurgudoo akka galmeesu fakki tahun gahe isa gumaache jira. Bara ummani Oromoo dukkana, gabrumma fi hacuuca hama keesa jiru mirga ummata kabachisuf jaalan qaqqali wajiiin qabsoo hidhanoo wara jalqabe injifannoo ummani Oromoo har’a ittin boonu kana argamsiisan keesa Jaaraa Abbaa Gadaa gahe ol’ana qaba.
Jaaraa Abbaa Gadaa jireenya isaa guutuu yeroo humnna qaban dagala Oromiyyaa keessa bara haali itti hammaate amo biyoota hola keesan qabsoo gageese fakki qabsawa haqa tahe seena bonsa galmeese darbee jira. Duuti ilma namaatif waan hin olee tahulee, du’atin gootichaa fi hayu akka Jaaraa Abbaa Gadaa ummata Oromoo fi qabsaa’ota bilisummaa Oromoo keesati hirdhina gudda qaba. Kanaaf, ummani Oromoo fi qabsaa’on Oromoo har’a gadda gudda keessa jiru.
Qabsaa’on amma qabso bilisummaa Oromootti jiran fakkenya Jaaraa Abbaa Gadaa fudhachuun kaayoo ini jalqabe akka galmaan gahan Jaarmayaan keenya abdi qaba. Qabsawan ni kufaa qabsoon itti fufa akkuma jedhamu qabsoo jaalan qaqqalin itti wareegaman galmaan gahuun dirqamaa fi gahe qabsaa’ota hafaniitti. Kanaaf, qabsoon keenya daran jabaate akka itti fufu gaafachaa, maatti Jaaraa Abbaa Gadaa akkasumas firootani fi miseensota qabsoo bilisummaa Oromoo hundaaf Waaqayo obsa fi jajabina isini haa kenu jenee maqa miseenota fi jaarmayaa keenyan gadda keenya isini ibsina.
Mar 5, 13 at 5:19 pm
Yoo dhugumaan dhimmi gabronfatamu ummata Oromoo isinitti dhagaahame ta’e jaarmiyaa keenya ABO tokkoomsa. Xiiqii ABO wajjin walqabdan dhiisaatii ABO dhugaa wajjin hiriiraa. Barreeffama internetiitti irratti tamsaasuun hinga’u.